Sida ugu dhakhsaha badan ee loo helo heesaha aan ku kaydinay iTunes | Waxaan ka socdaa mac
Markii sanadihii la soo dhaafay, Apple waxay tirtiraysay tirada howlaha iTunes ay noo diyaarinayso. Markii la sii daayay iOS 11, Apple wuxuu bilaabay dib u habeyn lagu sameeyay Apple Store, Apple Store oo noqday sida kaliya ee aan gacanta ugu hayno inaan raadino, soo degsano oo aan u soo iibsano codsiyada, maaddaama nooca iTunes uusan noo soo bandhigin marinka App Store.
Wax yar ka dib, Apple waxay aqoonsatay go'aankan keli ah inuu khalad ku noqon karo wajiga shirkadaha waaweyn iyo hay'adaha waxbarashada, maadaama markii la rakibayay codsiyada, kuwani ay xadidnaayeen, haddii aysan macquul ahayn, gaar ahaan xarumahaas ama shirkadaha aan ku haysan codsiyadaada sarkaalka Dukaanka Apple.
Ka waran haddii iTunes uu noo oggolaado xilligan marin u hel maktabaddayada muusikada, maktabadda oo aan kula jaanqaadi karno dhammaan aaladahayaga. Haddii badanaaba aanan haysan faylalka muusikada ee abaabulan, laakiin markaan soo dejisanno waxaan ku darnaa iTunes, waxay u badan tahay in mararka qaarkood lagu qasbi doono inaan ogaano halka sanku ka yahay hees gaar ah.
Hadday sidaas tahay, waa inaan tagnaa iTunes, guji heesta aan dooneyno inaan ku ogaanno halka ay ku taal Xuquuqda-guji oo ka xulo menu-ka hoos-taga Show ku yaal Finder.
Waqtigan xaadirka ah, daaqad Raadiyaha ayaa la furi doonta iyada oo ah buugga halka ay heestu ku taal, si aan ugu qabanno waxa aan ugu baahan nahay. Astaantan ayaa lagu heli karaa nooc kasta oo Apple ay sii deysay ee iTunes sanadihii la soo dhaafay.
Shaqadani sidoo kale waa mid cajiib ah haddii aan badanaa isticmaalno shaqada iTunes ee noo ogolaaneysa heesaha CD-yadayada u badalo MP3 muusikada ugu cadcad, haddii aan rabno inaan nuqul ka helno waddo kale oo adag ama fayl marka aan nadiifinayno Mac-ga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida ugu dhakhsaha badan ee loo helo heesaha aan ku kaydinay iTunes
Ku keydi wax kasta oo aad rabto Drobo 8D illaa 8 god iyo Thunderbolt 3